YEYINTNGE(CANADA): Sunday, September 25
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/25/20110အကြံပြုခြင်း
လူငယ်များရဲ့ ဧရာဝတီ ( ဆောင်းဦးလှိုင်၊ အနဂ္ဂနဲ့ ရသတို့ရဲ့ ဟောပြောချက်များ)
SaungOoHlaing Speech Irrawaddy by Demo Waiyen အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့ အသံဖိုင်ပါ..
AnatGa Speech for Irrawaddy by Demo Waiyen အဆိုတော် အနဂ္ဂရဲ့ အသံဖိုင်ပါ...
YaTha by Demo Waiyenအဆိုတော် ရသရဲ့ အသံဖိုင်ပါ
စောဒကတက်ခွင့် မပေးသည့် လွှတ်တော် ကျင်းပနေသည်
ကျင်းပနေဆဲ လွှတ်တော်မှာ လူထုတွေက ဘယ်လို ခံစားမှူတွေ ရှိနေကြသည်ကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက မရဲမ၀ံ့နှင့် တင်ပြနေကြသည်။ မေးခိုင်း၍လည်း တင်ပြနေရတာမျိုး ရှိနေသလို သူတို့တတ်သမျှ မေးစမ်းနေတာတွေကို တွေ့ ရသည်။ သို့ သော် ဖြေကြားသူ စစ်ယူနီဖေါင်းချွတ် ၀န်ကြီးတွေက ဖြေကြားနေတာကတော့ ရွံစရာကြီးဖြစ်နေသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်( မဲဆန္ဒနယ် -အမှတ်( ၁၀ ) မှ ဦးအုန်းတင်က မေးခွန်းမှာ ရှင်းနေသည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သော အင်အားစုများတို့ နှင့် တချိန်တည်းတွင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရန် အစီအစဉ် ရှိ-မရှိ မေးမြန်းသွားသည်။
ဦးအုန်းတင်၏ မေးခွန်းမှာ ယနေ့ ခေတ်စားနေသော သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးကို မေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်က သူနားမလည်သောအချက်တခုက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သို့ မဟုတ် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ မဟုတ်ဘဲ လူရိုသေ ရှင်ရို သေ ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့ မဟုတ် ပြည်ပတွင်ရှိနေသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေထဲက ပုဂ္ဂိုလ်များ သို့ မဟုတ် လက်နက်မကိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များလား ဆိုသည်ကို ခွဲ ခြား မပြောဆို၍ မည်သူ့ ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုသနည်းကိုမူ မသိ၊ စင်စစ်အားဖြင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းက သူများကို ဦးတည်ပါသည်ဟု ပြောလျှင် ဦးအုန်းတင်ကိုယ်တိုင်ပင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်နေ၍သာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ယခုကျင်းပနေဆဲ လွှတ်တော်ညီလာခံတွင် တက်ရောက်နေခြင်းဘဲဟု ပြောရလိမ့်မည်။ ထို့ ကြောင့် စောစောက ပြောခဲ့ သလို အလံရှူးလုပ်ပြီး ကိုယ့်ဖဲကိုယ်ချိုး လုပ်နေသော လွှတ်တော်အကြောင်းကို သိသာနိုင်သည် ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း မေးရမည့် အကြောင်းအရာများမှာ မိမိတို့သဘောဆန္ဒအရ မေးလိုသောအချက်အလက်များဖြစ်က သေသေချာချာ နားလည်တတ်ကျွမ်းရန်လိုသည်။ ယင်းမှာပြည်သူလူထုကို အကျိုး ရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မူတခုဖြစ်သည်။ သို့ မဟုတ်ဘဲ ကျင်းပနေသော လွှတ်တော်တာဝန်ခံများက ရေးခိုင်းပြီး မေးပြခိုင်းခြင်းလား စဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည်။
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ယခုမေးခွန်းမှာ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ချင်သောဆန္ဒရှိ မရှိကို ထင်ဟပ်သော မေးခွန်းဖြစ်ရာ သူတို့ ၏ မီဒီယာစင်မြင့်ဖြစ်နေသော လွှတ်တော်ညီလာခံမှာ တခါတည်း ဖြေဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နားလည်ယူဆစရာဖြစ်သည်။ ဖြေသည့်သူက ငပွကြီး ဦးကျော်ဆန်းဖြစ်ရာ နာမည်နှင့်လိုက်အောင် ဖြေဆိုသွားသည်မှာ နားမုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း၊ မျက်စိမုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်းဟု ပြောနိုင်လောက်ပါပေသည်။
ငပွကြီး ဦးကျော်ဆန်း အဖြေက နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်ရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး စသည်တို့ က ဤမေးခွန်းမှာ အကျုံး ၀င်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ ကြောင့် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးအတွက် MICC မှာ သမတဦးသိန်းစိန်က ပြည်တော်ပြန်လာဖို့ခေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မတူတာတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်နှင့်ပင် အလုပ်ကို အတူတွဲလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပမာ သမတဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ ဆုံပြီး ရှိနေခဲ့ ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေနှင့် အညီ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိစေသော ဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်များအတွက် ကျင်းပနေဆဲ လွှတ်တော်မှာပင် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနေ့ ကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့ ပြီဖြစ်ကြောင်း ရှည်လျှားထွေပြား ဖြေဆိုခဲ့ သည်။ အခုရေတွင်းတူး အခုရေကြည်သောက်လို့မရနိုင်သလို ရောမမြို့ ကို တရက်တည်းနှင့် တည်ဆောက်၍ မရနိုင်ဟုလည်း ပြောလိုက်သေးသည်။ ထို့ ကြောင့် အခုအချိန်မှာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာကို မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် အချိန်ကာလ တခုအထိ အတိုင်းအတာ လိုအပ်နေသည်ဟု တင်ပြသွားသည်ကို တွေ့ ရသည်။
မေးခွန်းထုတ်သောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာ ဖြေကြားသောဝန်ကြီးများ၏ အဖြေကို စောဒကတက်၍ မရ ။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ရင်ထဲ မည်သို့ နေမည်မသိ ။ ကျွန်တော်တို့ မှာ ပြောချင်သည်၊ ဆိုချင်သည် ၊ တုန့် ပြန်ချင်သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာ ခုမှ ရေတွင်းတူးနေသော ကိစ္စဟုဆိုသော ငပွကြီး ဦးကျော်ဆန်းမှာ ရှူးချင်ယောင် ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပြသနာက နှစ်( ၆၀ ) နီးကပါး ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေသာ အကျိုးဆက် နိုင်ငံရေးပြသနာဖြစ်သည်။ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆိုသည်မှာ ယင်းကိုဦးတည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မေးသူက မရှင်းမလင်းဘဲ မေးသောအရာဖြစ်နေသော်လည်း သူပြောသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များဆိုသည်မှာ နယ်စပ်လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်ေးဆာင်များကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ငပွကြီး ဦးကျော်ဆန်းက သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မပြုလုပ်နိုင်ဟု ပြောဆိုလိုက်ခြင်းသည်ဖြစ် ။သူတို့ ပြောနေသော နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဘာတခုမျှ မဆီလျှော်ပေ။ ကျွန်တော် တခါမက ဆောင်းပါးရေးဖူးသည်။ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်စရာအယင်မလိုဘဲ နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ပထမဦးစွာ ပြုလုပ်သင့်သည်ဟု ရေားဖူးပါသည်။ တချို့ ကစစ်အစိုးရ ( ယခု ) သမတဦးသိန်းစိန်၏ ရုပ်သေးအစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ရမည်။ ပြီးမှ နယ်စပ်ဒေသမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် လူရိုသေရှင်ရိုသေ ခေါင်းဆောင်များပါဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်သင့်သည်ဟု အကြံပေးရေးသား တင်ပြခဲ့ ဖူးသည်။
သို့ သော် ယခုတွေ့ ဆုံနေသော နှစ်ပွင့်ဆိုမျိုးမဟုတ် ။ မတူတာတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး တူတာတွေကို အလုပ်အတူ တွဲ လုပ်မည့် နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးကို ပြောခြင်းမဟုတ်။ မတူတာတွေကို တူအောင်ညှိပြီး အလုပ်တူအကျိုးတူ လုပ်ရမည့် ဆွေးနွေးပွဲမှသည် သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုရေးသားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ သမတဦးသ်ိန်းစိန်က နှစ်ပွင့်ဆိုင် တွေ့ ဆုံရေးကို ပြုလုပ်သည်မှာမှန်သည်။ သို့ သော် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံရေး ကံကြမ္မာကို သက်ရောက်သောတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲမျိုးတော့ဖြင့် မဟုတ်၊ သည်တော့ ယင်းတွေ့ဆုံပွဲမျိုးကို ခရီးသွားဟန်လွှဲ တွေ ဆုံပွဲ သဘောထက် ဘာများစကားလုပ်ပြီး ပြောစရာ လိုနေပါသနည်။ ပြီးတော့ ပြည်တော်ပြန်လာဖို့ အရေးကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောသွားအခါမှာ မည်သို့ မျှ ယုတ္တိယုတ္တာ မကျသည်ကို တွေ့ ရသည်။ ဖမ်းထားသော သူများကို မလွှတ်ဘဲ ပြည်တော်ပြန်လာသည့်သူများကို အရင် အဖမ်းခံလိုက်ပါဆိုသော သမတဦးသိန်းစိန်၏ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်မှူသည်လည်း သြချလောက်ပါပေသည်ဟု ပြောစရာမှအပ ဘာမျှမရှိတော့ ။
ယင်းစကားကို ငပွကြီး ဦးကျော်ဆန်းက တခါကျင်းပနေသော လွှတ်တော်မှာ ပြောလိုက်သေးသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနေ့ ကို လွှတ်တော်အတွင်းမှာပင် ကျင်းပနေပါသည်ဟု ဖန်တီးပြော ယူသေးသည်။ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနေ့အခန်းအနားကို လှိုင်သာယာမြို့ နယ်မီးခွက်ဈေးအနီးက မုဆိုးမ ဒေါ်ပု အိမ်နှင့် သာကေတ-က ဆိုက္ကားသမား ဦးမြမောင်-နေအိမ်မှာလည်း ကျင်းပ နေသည်ကို ထည့်ပြောသင့်သည်။ အကြောင်းမှာ မည်သူမဆို အခန်းအနားကို ကျင်းပ၍ရသည်။ ကျင်းပသောသူများနှင့် ကျင်းပသောနေရာတို့ မှာ သဟဇာတ ကျနေသလားဆိုသည်ကိုသာ လက်ခံသဘောပေါက်နားလည်ကြသည်။ လွှတ်တော်မှာကျင်းပသော ယင်းနေ့့ကို မည်သူကမျှ လက်မခံကြကြောင်း ငပွကြီးဦးကျော်ဆန်း နားမလည်သေးဟုထင်သည်။
ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေကို လက်နက်ချရန်လာခဲ့ ပါဆိုသော သဘောမျိုးကို ပြောသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်။ နိုင်ငံရေးပြသနာကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနည်းမျိုးမဟုတ် ။ အမှန်က တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆိုသည်မှာ ခရီးသွားဟန်လွှဲ တွေ့ ဆုံခြင်းကို ပြောခြင်းမဟုတ်။ ယင်းတွေ့ ဆုံမှူများမှလည်း မည်သို့ နည်းနှင့်မျှ ပြောင်းလဲလာနိုင်သည့် အခြေအနေကို ကောက်ချက်ချ၍ သုံးသပ်မရ ။ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဆိုသည်မှာ အမြင်မတူသော အကြောင်းအရာများကို အမြင်တူအောင် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီးတခုတည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်မှသာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၏ ရလဒ်ကို မြင်သာသိသာနိုင်သည်။
ထို့ ကြောင့် အခုလောလောဆယ်မှာ ပြောင်းလဲလာနေပြီဆိုသော စကားကို သံယသဖြစ်မိသည်။ ပြောင်းလဲလာနေသည်ဆိုခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံ အင်အားစုများနှင့် နိုင်ငံအကျဉ်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက်များအပေါ် မည်ရွေ့ မည်မျှ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးသနည်းဆိုသော ပေတံနှင့် တိုင်းတာရန်လိုသည်။ ခုတော့ဖြင့် သည်လိုမှ မဟုတ်လေခြင်း ။ သည်တော့တောင်းဆိုသူ၏ ဆန္ဒအတိုင်း ဘာမျှ မဖြစ်လာသောအခြေအနေမှာ သူတို့ရုပ်သေးအစိုးရက လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေသည်ကို ပြောင်းလဲလာနေပြီလို့ ကတာ့ ဘယ်လိုနည်းနှင့်မျှ ပြော၍ ရမည်မထင် ။ အကြောင်းမှာ ရုပ်သေးအစိုးရဖြစ်သော သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှာ တော်ကြာတမျိုး တမျိုး ပြောတတ်သော အုပ်စုများဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မရှိပါဘူးလို့တွင်တွင်ငြင်းနေသော အစိုးရ၏ သမ္မတ အကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ရှိနေသည် ။ သို့ သော် AAPP မှ တင်ပြသော စာရင်းနှင့် ကွာခြားနေသည်ဟု မနေ့ က မြန်မာနိုင်ငံကို မထွက်ခွါမှီ ဆိုသည်။ ဆိုတော့ ကိုက်ညီနေသော စာရင်းအတိုင်းကို လွှတ်ပေးမည်ဆိုလျှင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ရှိနေသည်ဟု ပြောရတော့မည်။
ထို့ ကြောင့် ကျွန်တော် ပြောချင်သည်မှာ တခုရှိသည် ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ညီလာခံတွင် ကျင်းပနေဆဲ လွှတ်တော်၌ မေးခွန်းများကို မေးသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဖြေကြားသော ၀န်ကြီး ငပွကြီး ဦးကျော်ဆန်း အဖြေကို မကြိုက် လျှင် နောက်ထပ် မေးစရာ မေးခွန်း တခုသာရှိ်တော့သည်။ ယင်းမှာ စောဒက တက်ခွင့် မေးခွင့်ပြုပါမည်လား ဆိုသော မေးခွန်း မေးရန်လိုနေသည်။ အကြောင်းမှာ ပြည်သူလူထုနှင့် ကမ္ဘာတခုလုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပြသနာသည် အခုမှ ရေတွင်းတူးနေသောကိစ္စ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုနေကြသည်။ ယင်းပြသနာကြောင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပါဟု တိုက်တွန်းနေကြသည်။ ခုတော့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ရန် အချိန် မလိုဟု ပြောတော့ ဤနိုင်ငံ ပြောင်းလဲ ရန် စိတ်ဆန္ဒမရှိသည်မှာ သိသာနိုင်ပြီ ။။
မြစ်ဆုံလာခံမှဦးဝင်းမျိုးသူ (မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ Eco Dev)
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအရေးအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပေါင်းဆုံပါဝင်ခဲ့သော သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဟောပြောပွဲကျင်းပ
Saturday, 24 September 2011 04:32
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအရေးအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပေါင်းဆုံပါဝင်ခဲ့ကြသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ဟောပြောပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ Parkroyal Hotel တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲကို ထွန်းလွင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ ဂျူးဖောင်ဒေးရှင်း၊ Eco Dev ၊ မုံရွေးစာအုပ်တိုက်တို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကာ ဟောပြောပွဲကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောပညာရှင် ဦးအုန်း၏ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားမှုဖြင့် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခန့်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် Eco Dev မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဝင်းမျိုးသူက ဧရာဝတီအတွက် မေးခွန်း ၂၀ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယင်းမေးခွန်းများတွင် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် တကယ်ရှိမှာလား၊ ငါ့မယုံငါ့ဘကြီးမေးမှာလား ယုံလို့ပုံပြီး ၀ကွက်အပ်မှာလား၊ တကယ်ပဲ ၇ ရာခိုင်နှုန်းလား၊ ရေဝေရေလဲ ထိန်းသိမ်းရေး ဘယ်သူ၊ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရော ထည့်တွက်ရဲ့လား၊ သဘာဝဘေး အာမခံနိုင်မလား၊ သန့်စင်သော စွမ်းအင်လို့ ထင်နေသလား၊ လျှပ်စစ်လိုချင်တာလား ဆောက်ချင်တာလား၊ အမျိုးသားစွမ်းအင်လုံခြုံရေး တကယ်စဉ်းစားထားသလား၊ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနဲ့ လဲမှာလား၊ အမျိုးသားအာဟာရ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘယ်လိုစဉ်းစားထားသလဲ၊ ကူးစက်ရောဂါနှိမ်နင်းရေး ထည့်စဉ်းစားထားသလား၊ ဇီဝ မျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေး တကယ်အလေးထားမှာလား၊ မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ရေငံတားတွေဆောက်ဖို့ ဒီရေတောတွေ စိုက်ဖို့ ငွေပေးမှာလား၊ မြစ်ကြောင်း ပြုပြင်ရေး ပိုလုပ်မှာလား၊ ရေကောင်း ရေသန့် သောက်သုံးရေ ပေးဝေနိုင်မှု ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးသွားမလဲ၊ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ လေးစားလိုက်နာမလား၊ သာတူညီမျှမှုနဲ့ တရားမျတမှု ဘယ်လိုအာမခံမလဲ၊ သယံဇာတ ကျိန်စာ တကယ် သင့်ကြတော့မှာလား စသည်တို့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ထွန်းလွင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံတည်ဆောက်ရန် အကြိုလေ့လာသည့် EIA တွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို ထည့်သွင်းမတွက် ချက်ထားခြင်း၊ ဧရာဝတီမြစ်၏ တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံထားမှု ဧရိယာ ကြီးမားပုံ၊ မြစ်ဆုံမှ မြစ်အောက်ပိုင်း အထိ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘ၀များအတွက် မှီခိုထားမှုများ၊ တရုတ် နိုင်ငံတွင် ဆည်ဆောက်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးကို ကြုံနေရပုံ၊ လာမည့် ဆယ်စု နှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းအပါအ၀င် ဒေသများတွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ကြုံနိုင်ခြေများ၊ ဆည်ဆောက်လိုက်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ရေအခက်အခဲ ကြုံရနိုင်ပုံ အစရှိသည်တို့ကို တင်ပြခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ရောက်ရှိလာသော ကချင်တိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒူဝါဇောင်ဂမ်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယိုယွင်းခြင်း၊ မြစ်ဆုံတွင် ဆည်ဆောက်မည် ဆိုခြင်းကြောင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဘဲ စိတ်ပူပင်နေရမှုများ၊ ရေကာတာ တည်ဆောက်လိုက်ပြီးနောက် ငလျင်ဖြစ်ပေါ်လျှင် မြစ်ကြီးနားမြို့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရေမြုပ်နိုင်ခြေ၊ မန္တလေးရေကြီးမှု၊ ပဲခူးရေကြီးမှုအကြောင်းများ၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသော တောင်ပြိုမှုများ၊ ရေကြီးမှုများ၊ ဆည်တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ် ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန် စသည်တို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အမှာစကားကို Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားခဲ့ရာတွင် ဧရာဝတီမြစ်အပေါ် တစ်နိုင်ငံလုံးက ချစ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပုံ၊ သတင်းမီဒီယာရှုထောင့်ဖြစ်သော ပြည်သူလူထုအသံကို နားထောင်စုဆောင်းကာ တင်ပြရခြင်း၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပေါ် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊ ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ မြစ်ဆုံအပေါ် အထွတ်အမြတ်ထားပုံ၊ ငလျင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသ ဆက်စပ်နေမှုအား အချက်အလက်များဖြင့် တင်ပြခြင်း၊ CPI ၊ Asia World တို့သို့မေတ္တာရပ်ခံမှုများ၊ တိုင်းရင်းသားများအားလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက် မြစ်ဆုံက အရေးပါနေပုံ အစရှိသည့် အကြောင်းအရာတို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဟောပြောပွဲသို့ ဆရာတော် သံဃာတော်များ၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်၊ စာပေအနုပညာနယ်ပယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ နယ်ပယ် စသည့် နယ်ပယ် အသီးသီးမှ စိတ် ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ညနေ ၄ နာရီခန့်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ သည်။
ဦးဝင်းမျိုးသူ (မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ Eco Dev)
ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းက မေခနဲ့ မလိခမြစ်နှစ်သွယ်မှာ ဆည်တွေ တန်းစီဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆည်ပေါင်း ၇ ဆည် လောက်ရှိမှာဖြစ် ပါတယ်။ မြစ်ဆုံရဲ့ အောက်နားမှာ ဆည်အကြီးကြီး တစ်ခုပါမယ်။ မြစ်ဆုံရဲ့ရေ၀ပ်မယ့်ဧရိယာက ၇၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ရှိတာတွေ့ရတယ်။ နယူးယောက်မြို့ အကျယ်အ၀န်းထက်ပိုပြီးတော့ ကျယ်တာတွေ့ရတယ်။ အခုဟောပြောပွဲမှာတော့ ကျွန်တော်အရင်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီအတွက် မေးခွန်း ၂၀ ဆိုတဲ့ စာတမ်း ထဲက လိုသလို ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ပထမမေးခွန်းတစ်ခုက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက စီးပွားရေးအရကော၊ အမှန်တကယ်ရော အကျိုး ရှိမှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဆည်ကြီးတွေက မျှော်မှန်းထားသလောက် စီးပွားရေး တွက်ခြေမကိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အများစုက Economic Rate of Return ပြန်မရတာ များပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ၀င်ငွေ ထွက်ငွေ အတက်အကျ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် မှန်းဆကြရတာပါပဲ။ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ ပိုပြီး ကုန်ကျတာတောင်မှ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် ၉.၅ ရာခိုင်နှုန်းရနိုင် သေးတယ်ဆိုရင် တစ်ခုခုတော့ မှားနေမှာ သေချာပါတယ်။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပြီးအောင် ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာပါ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က လေ့လာတဲ့ ဆည်ကြီး ၄၉ ခုဟာ မူလမှန်းထားတဲ့ အချိန်ထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၄လလောက် နောက်ကျပြီးမှ ဆောက်လို့ပြီးပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုတွေ မပြီးဆုံးနိုင်သရွေ့ ဆည်ကြီး အချိန်မီပြီးစီးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ နိုင်ငံတကာ ဆုံးရှုံးမှု အာမခံကုန်ကျစရိတ်ရော ထည့်တွက်ထားရဲ့လား ဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာ ဆည်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံသာမက၊ ဆည်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်တဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ လျော်ကြေးငွေ အာမခံစရိတ်တွေရော ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ ထည့်တွက်ရဲ့လား။ ဒါဆိုရင် စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု ဘယ်လိုပြောင်းသွားမလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဆည်ကိုရော စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းမှာသေချာရဲ့လား ဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာအချက် ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေဝေ၊ ရေလွှဲ ထိန်းသိမ်းရေးဟာ သစ်တောဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ပါ။ ဆည်တည် ဆောက်ဖို့ ငွေသုံးသလောက်၊ ဆည်ထိန်းဖို့ကျရင် အသုံးစရိတ်ခွဲဝေချပေးဖို့ လက်တွန့်ကြပါတယ်။ မေးခွန်းနံပါတ်(၂)က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းပညာပိုင်းယုံ ကြည်စိတ်ချရမှုအပိုင်းပါပဲ။ မကြာသေးခင်က တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမြန်ရထားတိုက်ခိုက်မှုက တရုတ်နည်းပညာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မေးခွန်းထုတ် စရာပါပဲ။ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ် ဖွင့်ဖို့လုပ်တော့ တရုတ်ကပို့လိုက်တဲ့ ရေအားတာပိုင်စက်အသစ်ကြီးက သံချေးတွေကိုက်နေလို့ ဓာတ်အားအပြည့်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက ဧရာဝတီမြစ်ရေရဲ့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ ယူမယ်ဆိုတာ သေချာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ သတင်းစာထဲမှာ ဧရာဝတီ မြစ်ရေရဲ့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲ မြစ်ဆုံက ယူမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မေးစရာမေးခွန်းတွေ အများကြီးပေါ် လာပါတယ်။ ဒီ ၇ ရာခိုင်နှုန်းက မြစ်ဆုံဆည်တစ်ခုတည်းက ယူတဲ့ ပမာဏလား။ မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက်လုံးမှာ ဆောက်မယ့်ဆည်တွေ အားလုံးက ယူထားတဲ့ ပမာဏလား။ သတင်းစာထဲမှာ နောက်တစ်ချက်တွေ့ပါတယ်။ နွေရာသီမှာ ရေပိုလွှတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ ဒီအချက်က အားရစရာပါပဲ။ ရေရှားချိန် ရေပိုသုံးနိုင်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရေများချိန်ရေများပြီး၊ ရေနည်းချိန်ရေနည်းတာဟာ သဘာဝပါ။ ရေနည်းချိန်မှာ ရေများလာတာ ဘသာဝကိုလွန်ဆန်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေရှိ နိုင်ပါတယ်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက ရေဝေရေလွှဲ ထိန်းသိမ်းရေးတွေကို ဘယ်သူက၊ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ဆိုတာပါ။ ရရှိတဲ့ ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံအချက်အလက်တွေအရ ၁၉၉၁ကနေ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ဆည်တည်ဆောက်မယ့်ဒေသရဲ့ ရေဝေရေလွှဲ ဒေသအချို့နေရာတွေမှာ ထူထပ်တဲ့ သစ်တောဧက ၇၀၀၀၀၀ကျော်ပျက် စီးပြုန်းတီးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စိုးရိမ်ရတဲ့ တွေ့ရှိချက်တစ်ချက်က ဒီဒေသက ရေခဲတောင် ဧက ၃၀၀၀လောက် ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲတောင်တွေဟာ ဧရာဝတီ မြစ်ရေပုံမှန်စီးဆင်းရေးအတွက် အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့အတွက် မြစ်ဆုံဆည် ပုံမှန်ရေရရှိရေးနဲ့ နှုန်းပို့ချမှု လျော့ချရေးကို စနစ်တကျစီမံဆောင် ရွက်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်မေးခွန်း တစ်ခုက ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကို ရောထည့်တွက်ပါသလားဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲတာတွေရှိနေတဲ့အတွက် ဆည်တွေရဲ့ တောင့်တင်းခိုင်မာစိတ်ချရမှုက အလွန်အမင်းအန္တရာယ်များ လာပါတယ်၊ သမရိုးကျတည်ဆောက်ရေး နည်းပညာတွေနဲ့ မလုံလောက်တော့ဘဲ ပြန်စဉ်းစားရမယ့် အခြေအနေရောက်နေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက ဒီဆည်တွေက သဘာဝဘေးခံနိုင်ပါ့ မလားဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ဒေသဟာ ငလျင်ကြောကြီး တွေရှိတဲ့ဒေသပါ။ လက်ရှိတာဝန်ရှိ သူတွေပြောနေတာက ဆည်ကို ဘယ်လောက်ခိုင်အောင် ဆောက်ထားတာလို့ ပြောနေတာတွေပဲရှိပြီး ဆည်ကြောင့် ငလျင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ကို ပြောမထားပါဘူး။ ဆည်တွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရေလျှံ ရေလွမ်းမိုးတဲ့ အန္တရာယ်ကို လျော့မတွက်သင့်ပါဘူး။
တရုတ် Three Gorges ဆည်ကြီး မိုးများလို့ အမြင့်ဆုံးရေမှတ်ရောက်ပြီး ဆည်ရေလွှတ်လိုက်ရလို့ ဆည်အောက်ပိုင်းရေလွှမ်းမိုးမယ့် အန္တရာယ်ကို ၂၀၁၀ မိုးတွင်းတုန်းက ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ချက်က လျှပ်စစ်လိုချင်တာလား၊ ဆောက်ချင် တာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆည်တွေက လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်တဲ့ အရင်းရှင် စနစ်ချစားမှုတွေရဲ့ တရားခံပါ။ ထင်ရှားတဲ့ သာဓကကတော့ မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ Pergam ဆည်ပါ။ ဒီဆည်အတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ထောက်ပံအကူအညီတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ တောင်အမေရိကနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပါရာနာမြစ်မှာရှိတဲ့ အီတိုင်ဖူ ဆည်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီမားဆုံး လာဘ်ပေးလဒ်ယူ အရှုပ်အထွေးရှိတဲ့ဆည်လို့ အမည်ပေးခံခဲ့ ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောချင် တာကတော့ အဌားကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ မလုပ်ကြဖို ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ပြောချင်တာကတော့ ဒီဧရာဝတီဟာ နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတ၊ အသက်သွေးကြော၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အလေးထားရတဲ့၊ National Heritage လို့ပြောတာနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဧရာဝတီမြစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မြစ်ကြီး ၁၃ သွယ်မှာ ၁၉၈၀ တုန်းက ဧရာဝတီမြစ်အပါအ၀င် မြစ်ကြီးတွေမှာ သူ့ရဲ့ watershed ဆိုတဲ့ catchment area ဘယ်လောက်၊ နုန်းပို့တာ ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် figure တွေလည်း ရှိပါတယ်။ မနေ့က ပြောသွားတာတွေ အကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောရရင် ငှက်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးညွန့်က တစ်နေ့တစ်နေ့ကို ဧရာဝတီမြစ်က ရွှေပိသာ ၃၀ လောက်ရတယ်။ ပိသာ ၃၀ လောက်ရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တွေးတာ ဆင်းရဲသားတွေ တစ်နေ့မှ ရွှေတစ်မူးသား၊ တစ်မတ်သားလောက် ၀မ်းစာအတွက် ရွှေကျင်တာလောက်တော့ ခွင့်လွတ်ရမှာပေါ့လေ။ အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ စက်တွေနဲ့၊ ယန္တရားတွေနဲ့ ရွှေတွေကျင်ကြ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ သယံဇာတတွေကို တခြားနိုင်ငံက အရင်းရှင်တွေက ထုတ်သွားကြနဲ့၊ ထုတ်သွားကြတဲ့အခါမှာ သာမန်ရွှေကျင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ မာကျူရီလေးဘာလေး နည်းနည်းသုံးမှာပေါ့လေ။ သဘာ၀၀န်းကျင်တော့ ထိခိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ မာကျူရီရော ဆိုင်ယာနိုက်ရော ဧရာဝတီမြစ်ကို အန္တရာယ် ဖြစ်လောက်စေတယ်။
ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာက ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ရွှေကျင်တာတွေ။ မြစ်တစ်ကြောမှာ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံတွေ ဆောက်တယ်၊ စက္ကူစက်တွေ ဆောက်တယ်။ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတွေ ဆောက်တယ်။ စက်ရုံတွေက စွန့်ပစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဘာမှသဘာ၀၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းဆိုတာမရှိဘူး၊ ဖြစ်သလို ထုတ်တယ်။ အဲဒါတွေဟာ အခုလို ပွင့်လင်းတဲ့၊ ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်နေတဲ့ အစိုးရ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရလာပြီ။ ပြောဖို့လည်း လိုပါတယ်။
ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်တယ်ဆိုတာ hydropower အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ကို ရောင်းစားတယ်။ ရောင်းစားတာကတော့ စီးပွားရေးအရ မဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံမှာ လုပ်ရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူရဲ့ source၊ dam တစ်ခုရဲ့ အထက်မှာဆိုရင် watershed ၊ ရေဝေရေလဲဒေသပေါ့၊ watershed က ဘယ်လောက်အထိ အရေးကြီးသလဲဆိုရင် biodiversity မှာ သစ်ခွက ၈၄၁ မျိုးရှိတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အမျိုး ၂၀၀ လောက်ပဲရှိတဲ့ သစ်ခွမျိုးဟာ ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းကို ၁၁၀ ကျော်ရှိတယ်။ တိရစ္ဆာန်ဆိုလည်း ပင်ဒါနီတွေ၊ ကျားဆိုလည်း ဟူးကောင်းချိုင့်ဝှမ်းမှာ ကျားထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိတယ်။ ကာကွယ်ထားတဲ့ ဧရိယာအဖြစ်နဲ့ ထိန်းတယ်။ Corridor အဖြစ်နဲ့ထိန်းတယ်။ WCS က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က ပြောတာတော့ ခြောက်ကောင်ပဲ ကျန်တော့တယ်တဲ့။ အဲဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်တယ်ဆိုတာလည်း စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ စနစ်တကျနဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု၊ ဒေသကလူတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ သူတို့နဲ့ conservation ဆိုပြီးတော့ စိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့၊ အလှပြတဲ့ conservation မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒေသခံတွေနဲ့ ဆက်စပ်တာ၊ အကျိုးပြုတာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမပါရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
နောက်တစ်ခုက dam ရဲ့အထက် watershed ၊ ဒီ watershed ကလည်း သစ်ခွတွေ၊ အကောင်ပလောင်တွေ၊ biodiversity။ Biodiversity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးဟာ watershed ဧရိယာသည် ဟိမ၀န္တာ flora၊ fauna နဲ့ မလေးရှား flora၊ fauna ဆက်စပ်တဲ့ နေရာ၊ ဟိမ၀န္တာရဲ့ သယံဇာတဖြစ်တဲ့တောတွေ၊ အကောင်တွေ၊ ငှက်တွေ၊ အဲဒါတွေ တွေ့ရတယ်။ မနေ့က ဒေါက်တာစောလွင် (သစ်ခွပညာရှင်) နဲ့တွေ့တော့ ဒါက သစ်ခွတွေရဲ့ နေအိမ်ပဲတဲ့။ ထိုင်းမှာ သစ်ခွအတွက် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ရတယ်။ နောက်လေး၊ ငါးနှစ် နေရင် သန်း ၃၀၀၊ ၄၀၀ ရအောင် ကြိုးစားမယ်။ သူတို့ origin ကတော့ မြန်မာပြည်က။ မြန်မာပြည်ကမျိုးကို ပျိုးတယ်။ နိုင်ငံခြားမျိုးနဲ့ စပ်တယ်။ ရောင်းတယ်။
ဆည်မြောင်းပညာရှင် တစ်ယောက်ကပြောတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် တုန်းက ဟင်္သာတလိုနေရာမျိုးရေ မြုပ်မတတ်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါကို သူတို့က ပညာရှင်အမြင်နဲ့ ဒါတွေ သက်သာအောင် dam တွေ ဆောက်မယ်။ dam ဆောက်တဲ့အတွက် ရေကြီးတာ လျော့သွားမယ်တဲ့။ ဒါသူတို့ အတွေး။ ကျွန်တော်က တွေးတာကတော့ dam ဆောက်ဖို့မလိုဘူး။ ဒါတွေလျော့အောင် watershed ကို ထိန်းရမှာ။ သစ်တောရော၊ ဆည်မြောင်းရော၊ စိုက်ပျိုးရော၊ စက်မှုရော၊ သတ္တုတွင်းရော အားလုံး ၀န်ကြီးဌာနအကုန်လုံး ဒေသခံတွေနဲ့ပါ ထိန်းမယ်ဆိုရင် ဒီရေကြီးတာကို ထိန်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို biodiversity မျိုးစုံကြယ်ဝတဲ့နေရာ၊ ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ နေရာကို နိုင်ငံခြားသားတွေက ဘာပြောသလဲဆိုတော့ မင်းတို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်မတန်ရှားတဲ့၊ ရှားပါးမျိုးစိတ်တွေရှိတဲ့ ဒီလိုဒေသကို မထိပါးဘဲထားတာ အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။ ကျွန်တော် ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံပါတယ်။
အစိုးရရော ပညာရှင်တွေရော သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရော အချိန်မီ တိုင်းပြည်ကို မနစ်မြုပ်မီမှာ ထိန်းပါ။ တောတွေကို ထိန်းပါ။ တရုတ်ပြည်က Three Gorges ဆည်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ငွေချေးဖို့စဉ်းစားတာ ၁၀ နှစ်ကြာတယ်။ အဲဒီလောက် ၁၀ နှစ်စဉ်းစားပြီးမှ အခု ဒီဆည်လုပ်ခဲ့တာ ဟုတ်ခဲ့သလား၊ မဟုတ်ခဲ့ဘူးလား။ အများကြီး ပြောနေကြပြီ။ တော်တော် ဒုက္ခရောက်နေကြပြီ။ မြစ်တွေတချို့ ရေမရှိတော့ဘူး။ ကော်လိုရာဒိုမြစ်ဆို ပင်လယ်ထဲကို မစီးတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပင်လယ်ထဲကို မစီးတော့တာကို ကြည့်နေမလား။ မကြားချင်ဘူး။ ဒီအစည်းအဝေးသည် ဒါမျိုးတွေကို အချိန်မီစဉ်းစားရမယ်။ အစိုးရကို ပညာရှင်တွေက တင်ပြရမယ်။ ဒီနေ့ ပညာရှင်တွေ စုံတယ်။ ဧရာဝတီဟာ အမျိုးသား အမွေအနှစ်တင်မကဘူး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးက တန်ဖိုးထားတဲ့ အမွေအနှစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံ ညီလာခံ မှ ဒူဝါဇောင်ဂမ်
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအရေးအတွက် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပေါင်းဆုံပါဝင်ခဲ့သော
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဟောပြောပွဲကျင်းပ
အားလုံးကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မြစ်ကြီးနားကလာတဲ့ ကချင်အမျိုးအသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ဆိုတော့ ဗမာစကားပြောရတာ ကျွန်တော်လည်း ကချင်စကားပဲ ခပ်များများပြောတာ ဆိုတော့ အညာက ဗမာစကားကို ပြောပါမယ်။ သည်းခံပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။
ကြွရောက်လာတဲ့ လူကြီးမိဘများ၊ ဒီနေ့ တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှ အခွင့်အရေး လိုချင်မှု တောင်းနေကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ခန့်မှန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ လုံးဝစိုပြေအေးချမ်းဖို့ လိုချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ယိုယွင်းလာတဲ့ဟာကို မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်လိုမှလည်း အိပ်မပျော်ကြပါဘူး။ အခုက ဒီမိုကရေစီခေတ် အပြောင်းအလဲ အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ကို အခုပြောသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အင်မတန်မှ စုံလင်စွာ ပြောတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်မသိတာလည်း အများကြီးပေါ့၊ သိလာတဲ့အခါကျတော့ ပိုပြီးမှ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ခေါင်းထဲမှာ အမျိုးမျိုး စဉ်းစားလာတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ ဧရာဝတီမြစ်ဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက်လမ်းကြောင်း မိခင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲမိခင်ကြီးရဲ့ မြစ်ဆုံမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မယ့် Dam လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က စိတ်ထဲမှာ အမျိုးမျိုးခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ကလည်း အိပ်မပျော်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်မှာ အခုမြစ်ဆုံအကြောင်း ပြောတဲ့အခါမှာ ဧရာဝတီမြစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့အကျိုးကို ဘယ်လောက်ဖြစ်ထွန်းခဲ့သလဲ၊ အကျိုးပြုခဲ့သလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က ပြောပြတဲ့အထဲမှာ သိရတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်အဆုံမှာ တည်ဆောက်မယ့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအကြောင်း ကျွန်တော်တို့တွက်တဲ့အခါမှာ ဒီမြစ်ဆုံဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးနေသလဲ၊ ကနေ့ ဒီမြစ်ဆုံအကြောင်း ပြောတဲ့အတွက် မြစ်ဆုံဒေသအကြောင်း ပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မမြင်ဖူး၊ မသိဘူးတဲ့သူတွေ စုံလာတာကလည်း ဒီမြစ်ဆုံကိစ္စကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြန်စုစည်းပြီးတော့မှ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မကုန်မခမ်းသွားဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ပြီးတော့မှ အသုံးပြုသွားနိုင်ဖို့ ဒီမြစ်ဆုံဟာ ကျွန်တော်တို့ ရိုးရိုးမြစ်ဆုံမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမှာအတူ ဆုံစည်းပြီးတော့မှ ရှိလာတယ်ဆိုတာကို ဒီမှာ ကျွန်တော်က စဉ်းစားမိပါတယ်။
အခုကျွန်တော်ပြောမှာကတော့ ဒီရေကာတာလုပ်လို့ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းအားဖြင့် ကျွန်တော် တခြားသိပ် မပြောတတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က မြစ်ကြီးနားမှာ နေပြီးတော့မှ အဲဒီမြစ်ဆုံနားမှာ သွားကြီးတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အမျိုးမျိုးတွေးကြည့်တယ်။ တကယ်လို့များ မြေငလျင်လှုပ်လာပြီလို့ဆိုရင် ဒီမြစ်ဆုံရေကာတာက ရေဟာပေအမြင့် ၄၀၀ကျော် ၅၀၀နီးပါးလောက် မြင့်တက်လာမှာကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အကယ်၍ ဒီဟာ ပြိုကျလာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အများပြောနေတာက စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ မြစ်ကြီးနား မြို့ဟာ မြုပ်သွားနိုင်မယ်။ ပုံနှိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ရေအိုးစည်တစ်အိုးလို လျှပ်စစ်တွေဟာ အကုန်လုံး လွင့်ထွက်သွားသလိုပဲ အကုန်လုံး ကျွန်တော်တို့ဟာလည်း ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်နေကြတဲ့ သူတွေ အကုန်လုံး၊ ဒါတင်မကဘူး တောတိရိစ္ဆာန် ကျွန်တော်တို့မွေးထားတဲ့ ကျွဲနွားအကုန် အကုန်လုံးပါသွားကြမှာပဲ။ ဟိုးတောင်ထိပ်မှာ သစ်ပင်ပေါ်မှာ တွဲလောင်းကြီး ကုတ်ကတ်နေကြမှာကို မြင်မိပါတယ်။ တွေးမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် မပျော်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီသဘာဝဘေးဒဏ်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ရှောင်ရှားကြမှာလဲ။ သဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုတာ လက်တွေ့မှာလည်း ရှိပါတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော် ရေဒီယိုထဲမှာ နေပြည်တော်ကလွှင့်တဲ့ အသံကို နားထောင်တဲ့ အခါကျတော့ ပဲခူးမှာလည်း ရေလျှံတယ်၊ မန္တလေးမှာလည်း ရေလျှံတယ်ဆိုတဲ့အခါ မနေ့က ကျွန်တော် လေယာဉ်ပျံစီးလာတဲ့အခါ ကျွန်တော် ငုံ့ကြည့်တဲ့ အခါကျတော့ ဟုတ်တာပေါ့။ အခုတောင် နည်းနည်းလေး သက်သာလာပြီ။ လယ်ကွက်တွေမှာ ရေတွေ ပြင်ကြီးဖြစ်နေတာ ရေပင်လယ်ကြီးပဲ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အော်ဒါလည်း သိပ်ကြီးကျယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြေးနိုင်သေးတယ် ရှောင်နိုင်သေးတယ်၊ ရေကြီးတယ်ဆိုတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးလာတဲ့အခါ ပြေးလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်တော်တို့ ၀မ်းစာအတွက် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ အပင်တွေ အကုန်လုံး မြုပ်ကုန်ပြီ၊ သေကုန်ပြီ၊ လူတွေကလည်း ဒီရေကို ဒီမှာရေကြီးလို့ မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ အိုးခွက်တွေပစ်ပြီးတော့မှ မြင့်ရာကုန်းမြင့် ကို ဘေးလွတ်ရာမှာ သွားနေရတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ကြားနေရတယ်။ မနေ့က ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ မှန်တာပေါ့လို့၊ ဒါပေမယ့်လို့ မန္တ လေးနဲ့ ၀မ်းတွင်းဘက်မှာ ရေကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို ဘယ်သူက လုပ်တာ တုန်း၊ ဒါလည်း သဘာဝဘေးဒဏ် ရှောင်တိမ်းနိုင်တဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မရှောင်တိမ်းနိုင်တာက အခုနက ပြောတဲ့ စိုက်ထားတဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မြုပ်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုရေကြီး တာကို ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ မဖန်ဆင်းနိုင်ပါဘူး၊ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လည်း ဒီဟာကို ကျွန်တော်တို့ တားဆီးလို့ မရပါဘူး။ ကြိုတင်တွက်ချက်လို့လည်း ဘယ်လိုမှ မတွက်ချက်နိုင်ပါဘူး။ ဒီသဘာဝ ဘေးဒဏ်ဆို အခုဖြစ်နေတဲ့ မြစ်ဆုံရေကာတာကို လုပ်မယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှ ကြီးမားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အကယ်၍ မြေငလျင်လှုပ်တာတို့ မိုးတအားကြီးလို့ ပြိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့က ပြေးစရာရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော် ပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့ ဒီရေဘေးဒုက္ခအကြောင်းကို ကျွန်တော် ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ဆယ်ချက်လောက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးထား အလွတ်သဘောနဲ့ ပြောပြချင်တာပါ။ ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင် ၀ါးရှောင်ဆည်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြစ်ကြီးနားအထက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါလည်း ရေကြီးလာတဲ့ အခါကျတော့ ဆည်ကြီးက တစ်ခြမ်းပါသွားပါတယ်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်လောက်မှာ တောင်ကြီးတစ်ခြမ်းပြိုသွားတာ ရေက တစ်ခါတည်းပေါက် ကွဲထွက်လာပြီး တောင်ကြီးပြိုသွားတာ။ ပြိုသွားတော့ မြေမှုန့်တွေ မြေကြီး တွေက တစ်ခါတည်း စီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေဟာ အဲဒီတလျှောက် မိုးမောက်၊ ဗန်းမော် အဲဒီတလျောက်မှာရှိတဲ့ လယ်ကွင်းတွေ အကုန်လုံး သဲသောင်ကြီး တွေ ဖြစ်သွားတဲ့အထိ မြင်ရပါတယ်။ နောက် ဆယ်နှစ်လောက် ဘာမှ စိုက် စားလို့ မရဘူး။ အခုမှ စိုက်စားလို့ရတယ်။
နောက်ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ လိုင်ဇာက ဆင်းလာတဲ့ မူလွယ်ခဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီ နားလုံ၊ နားလုံဆို တာနားမှာ ရေကြီးတယ်။ အဲဒီရေကြီးတာက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီရေစီးလာတဲ့ အခါကျတော့ ည၊ ညလူအိပ်ချိန်မှာ အသံကြီး ကျယ်လောင်စွာနဲ့ပဲ လာတဲ့အခါကျတော့ လူတွေက ထကြည့်တယ်၊ ထကြည့် လိုက်တာနဲ့ ဟိုမှာ သစ်ပင်ကြီးတွေ အကြီးကြီးတွေ ၀ါးရုံကြီးတွေ တစ်ခါတည်း မျောပါလာတယ်။ မျောပါလာတဲ့အခါကျတော့ လူတွေက ကိုယ်လွတ် ထွက်ပြေးရတဲ့ အခါကျတော့ တစ်ချို့ကတော့ ကုန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ အဲဒီသစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ ပါသွားတယ်။ ပါသွားတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်မှလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆယ်လို့မရတော့ဘူး။ နားလုံရွာကလည်း ဟိုးအဝေးကြီး လယ်ကွင်းတွေတလျှောက် သဲသောင်ပြင်ကြီး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အခါ ဆယ်ချက်လောက်ရှိပါတယ်။ နောက် တန်ဖဲရေအားလျပ်စစ်ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ နောက် ကျိန်ခရမ် ရေအားလျပ်စစ်၊ ဒါလည်း ဒီလိုပဲ တောင်ကုန်းပေါ်က ရေက ခြောက်နေရာလောက် တစ်ခါတည်းပေါက်ကွဲပြီးတော့မှ ရေတွေပြိုကျတယ်။ ရေတွေပြိုကျတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီအောက်မှာ ရှိတဲ့ ရေအားလျပ်စစ်စက် ရုံက ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ဘယ်လိုမှ ပြေးဖို့လမ်းကို မရှိတော့ဘူး။ အကုန်လုံးပါသွားတယ်။ အလောင်းတောင်ရှာလို့ မတွေ့တော့ဘူး။ ရွာလည်းပါသွားတယ်။ အဲလိုဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖဲ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ရှိတဲ့နားက တန်ဖဲရွာလည်း တခြမ်းပါသွားတယ်။ ဒါလည်း ညဘက်အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကျတော့ ဘယ်သူမှလည်း ပြေးမလွတ်တော့ဘူး။ လူတွေရော အိမ်တွေရော အကုန်လုံးပါသွားတာ ရှိတယ်။ ဒါမျိုး ကျွန်တော်တို့ ခဏခဏ တောင်ပြိုကျ လို့ ဆင်းလာတဲ့ရေကို ကျွန်တော်တို့က ကချင်လိုတော့ မော်ရိုလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီမော်ရိုဖြစ်လာမယ့်ဟာကို ဘယ်သူ၊ ဘယ်ပညာရှိမှ ကနေ့အထိ ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်ဌာနကမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်ပြတာ မရှိပါဘူး။ တွက်ချက်လို့လည်း မရနိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ဖြစ်လာတာကို တားဆီးဖို့ နည်းလမ်းမရှိဘူး။ ဖြစ်ချင်သလောက် ဖြစ်ပြီးမှ ပြီးခါမှ ကျွန်တော် တို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရတာ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့က ဒီမော်ရိုကို ကြောက်လန့်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုထိကျွန်တော်တို့ အမျိုးမျိုး ရေကာတာရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေကို အများကြီး တင်ပြတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အင်မတန်မှ ပညာရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အားလုံးဟာ လူအမျိုးမျိုးနဲ့ အမြင်အမျိုးမျိုး အခုကျွန်တော်တို့ ဒီမှာလုပ်နေတာ လူအမျိုးမျိုး ပညာရှင်အမျိုးမျိုး မီးမောင်းထိုးပြတာ ရရှိတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့က အများကြီးပဲ ၀မ်းသာစရာရှိပါတယ်။ များများတိုင်ပင်တာရှိရင် လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါတယ်။ နည်းနည်းပဲ တိုင်ပင်တာ သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကပဲ လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မအောင်မြင်တာများပါတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ အခုဒီကနေပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကရရှိတဲ့ သတင်းအမျိုးမျိုးကို ရွာကို ကျွန်တော်ပြန်တင်ပြပါမယ်။ အစိုးရကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုကြောင့်ကြနေတာကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအာဏာရှိအပိုင်းကလည်း စဉ်းစားပေးမှာပါလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ အခုက ကျွန်တော်တို့က ဒီမိုကရေစီအစိုးရလည်း ဖြစ်လာတဲ့ အခါကျတော့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာ ဒီပြဿနာ ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ဒီဟာကို တကယ့် ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ လူအများ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဟာကို လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် ငြင်းပယ်မှာမထင်ပါဘူး ပြောကြားရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံ ညီလာခံ မှဒေါက်တာထွန်းလွင် (ထွန်းလွင်ဖေါင်ဒေးရှင်း)
ဧရာဝတီရဲ့ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဆိုတာ သိသာနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်အရ ကျွန်တော့်အမေ ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမတာကို သတိရလာပါတယ်။ ဧရာဝတီဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုပြောမလဲ။ ကြိုက်သလို ပြောလို့ရတဲ့ တစ်ကယ့် ရတနာကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်ကယ့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ကြီးလို့ ပဲပြောပြော၊ ဘာသာရေး အမွေအနှစ်ပဲပြောပြော၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘယ်ရှူထောင့်ကပဲကြည့်ကြည့် မလွတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးကျေးဇူးပြုဖူးပြီး ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာတွေတောင်မှ အမေနဲ့ နှိုင်းပြီးတင်စားခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမြစ်ကြီးပေါ်မှာ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ အလုပ်ကြီးကို ဒီလိုပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နေတဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကတော့ ပါသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ကျွန်တော် ပိုပြီးမှာချင်တာက EIA Report အပါအ၀င် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြောနေကြတဲ့ Climate Change ဆိုတဲ့အပိုင်းဆိုတဲ့ Issue ပါ။ ဒီအကြောင်းကို စာပိုဒ်လေး တစ်ပိုဒ်၊ စာရွက်လေးတစ်ရွက်တောင် မပါပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် မိုးလေ၀သဌာနမှာ ၄၈ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် စင်ပေါ်တက်လာတာပါ။ ''ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်လှ''ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ကို ကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြီး အမှတ်ရစေချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ တံတားတွေအများကြီး ဆောက်ပြီး ပဏာရနေတဲ့ ဧရာဝတီ၊ တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့၊ ဒီရေတာစုံ လမုတောရှိတဲ့၊ သစ်လုပ်ငန်း၊ ၀ါးလုပ်ငန်း၊ ဘာသာရေး သွားလာရေး မြို့နေလူထု၊ တောနေလူထု အကုန် မှီတင်းနေတဲ့ မြစ်ကြီးဖြစ်တယ်။ ဧရာဝတီရေကို အမှီပြုပြီး စိုက်ပျိုးရတဲ့ မြို့တွေလည်း ဧရာဝတီတစ်လျောက်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဧရာဝတီကို အရင်တုန်းကတော့ ခံစားစရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ကြည့်ပြီးတော့ ဧရာဝတီနေ၀င်ချိန်ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ရိုက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဧရာဝတီရဲ့ နေ၀င်ချိန်ဆိုတာ တစ်ကယ်ပဲဖြစ်နေပြီလား။ ဧရာဝတီနေ၀င်ချိန်ကို ကျွန်တော်တို့တစ်ကယ်ပဲ တွေ့ကြရမှာလား။ ဒါလေးတွေဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်း စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က စစ်ကိုင်းတံတားကြီးကို ဧရာဝတီကရေပြင်ကျယ်ကြီးနဲ့ လှလှပပနဲ့ ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ စစ်ကိုင်းတံတားကြီးကို သောင်ခုံနဲ့ ကူးပြီးတောင် သွားလာလို့ရတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေပါတယ်။ ဧရာဝတီ ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးဆိုတာကို သိစေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အိမ်နီးနားချင်းကလေးတွေ မြစ်ကြီးတွေပေါ်မှာ ဆည်တွေဆောက်လို့ ဒဏ်ခတ်ခံနေရပြီး သူတို့ဘ၀တွေပျက်နေပြီ ။ ဒါလေးကို နည်းနည်းလေး အချိန်ပေးပြီး လေ့လာလိုက်တာနဲ့။ တို့လည်း ဒီလမ်းလျှောက်ရင် ဒီခရီးရောက်မှာပဲဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဒီအချက်လေးကို ကျွန်တော် အဓိကပြောချင်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုကြပါစို့။ မုန်တိုင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အလွန်ကြီးမားတဲ့ မုန်တိုင်းဒီရေလှိုင်းတွေ ၀င်တဲ့အခါမှာ လူပေါင်း ၁၃၈၀၀၀ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ဒီလောက် အသေအပျောက်များတဲ့ အဖြစ်မျိုး မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ မဖြစ်ဘူးပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုန်တိုင်းဒီရေလှိုင်းကြောင့် သေပျောက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ လှမ်းခေါ်ရင် ကြားရတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက် လူအသေအပျောက်များတဲ့ နိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ သတိမထားခဲ့ကြဘူး။ အိမ်နီးချင်းကလေး အရိုက်ခံရတာကို မြင်တာကို ကျွန်တော်တို့ ဂရုမစိုက်ခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပညာမရခဲ့ဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ဘာမှ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ထားခဲ့ရဘူး။ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း အကြောင်းပြောရတာ တော်တော်ကို ရင်နာစရာ ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုအကြောင်း ဘာမှမပါပါဘူး။ ဘာမှ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ လေ့လာရကောင်းမှန်းလည်း မသိပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေကိုလေ့လာရာမှာ အုပ်စု ၁၀ စုရှိနေပါတယ်။ တချို့က ဒါတစ်ကယ်ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့က ဒါသဘာဝပါ။ တချို့ကလည်း ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းမှဖြစ်မှာပါ။ တချို့ကလည်း ဒါမြန်မာပြည်ကို မထိခိုက်ပါဘူး။ တချို့ကလည်း ဒါစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ပိုတောင်အကျိုးရှိမှာပါ။ တချို့က အစိုးရတာဝန်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။ တချို့က နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့စာရင် ပါးပါးလေးပါ။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ တချို့လည်း ပြောကြတယ်။ ဒီခေတ်က အိုင်တီခေတ်ကြီးပါကွာ။ နည်းပညာတွေနဲ့ ဖြေရှင်းသွားကြလိမ့်မယ်။ အချို့ကလည်း ပြောတယ်။ မင်းကလည်းကွာ။ ကံကံ၏အကျိုးပါပဲ။ အဲဒီ ၁၀ မျိုးထဲမှာ ဒီမှာ နားထောင်နေတဲ့သူတွေက ဘယ်အမျိုး အစားထဲမှာ ပါနေပါသလဲ။ ဒီ ၁၀ မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးမှာပါနေရင် အယူအဆ လွဲမှားနေတယ်လို့ ယုံကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပူချိန်ပြဇယားတွေကို ကြည့်ရင် နေ့အပူချိန်တွေတိုးပြီး ညဘက်လည်းမအေးပါဘူး။ နောက်ပြီး မုတ်သုံဝင်ရက်တွေ နောက်ကျလာတယ်။ အနည်းဆုံးတစ်ပတ် ဆယ်ရက် နောက်ကျပါတယ်။ ပြီးတော့ မုတ်သုံအထွက်ကလည်း သိသိသာသာ စောလာတယ်။ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းကနေ တစ်ဆင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အထိ မုန်သုံထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မုတ်သုံကာလ လျော့နည်းလာတာဟာ အဆိုးဆုံးအချက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ပြသတဲ့ မြေပုံမှာ မြစ်ဆုံဒေသဖြစ်တဲ့ ကချင်ဒေသဟာ မပါသေးပါဘူး။ ဒီအချိန် အထိ အဖြူရောင်နယ်မြေလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံ Project ကြီးလုပ်လိုက်လို့ နောက် ၁၀ နှစ် ၁၅ နှစ်နေရင် ကချင်ပြည်နယ်ကိုလည်း အဲဒီ မြေပုံမှာ အရောင်ခြယ်ရတော့မယ်။ ကချင်ကို ဒီအတိုင်းထားလို့ မရတော့ဘူး။ အ၀ါရောင်လောက်ဆိုရင် တော်သေးတယ်။ အနီရောင်အထိ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် ထိခိုက်နစ်နာမှု အမြင့်ဆုံး ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ3Gorges Dam ကြောင့် ယန်စီမြစ်မှာလည်း ရေမျက်နှာပြင် စံချိန်တင် လျော့ကျမှုဖြစ်ပေါ် နေတဲ့အတွက် Dam နေ့စဉ် ရေကုဗမီတာ ၄ သန်း ထုတ်လွှတ်ပေးနေ ရပါတယ်။ ဒီအတိုင်းကြည့်ရင် ဒီဆည်က ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပေမဲ့ ဆည်ကရေတွေကို ဖမ်းထိန်းထားလို့သာ ယန်စီမြစ်မှာ ရေမရှိတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆည်သာမဆောက်ဖြစ်ရင် ယန်စီမြစ်မှာ ရေမရှိစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုခြောက် သွေ့လာတာနဲ့အမျှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က နေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ၁၀ နှစ်တာအတွင်း ရေချိုရေသန့် ရရှိမှုဟာ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းလာတယ်။ မိုးခေါင်မှုတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြုံတွေ့လာတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်အစိုးရက ရေအမြောက်အများရရှိနိုင်တဲ့အပေါ် အမြင်ပြုပြင်တဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်မှုကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့ လူထုစည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတွေကို တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်က အရင်တုန်းက ကျောက်မီးသွေးကနေ လျှပ်စစ်ထုတ်တယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ်အပျက်တွေ့ကတော့ Climate Change နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Kyoto Protocol ပြဿနာ၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု အများဆုံး၊ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်မှာ တာဝန်တွေအများကြီး ရှိတယ်။ Carbon Credit တွေရဖို့ကို လုပ်ဖို့လိုလာတယ်။ ဒါကြောင့်် တရုတ်ပြည်မှာ ရေအား လျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ မြစ်တစ်စင်းပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကျန်တဲ့မြစ်အားလုံး ထုတ်ပြီးပြီ။ မြစ်ကြီးတွေမှာ Dam တွေဆောက်တာတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေက အမြဲဆန့်ကျင်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့က ကျန်တဲ့မြစ်တွေကို လူမိုက်လုပ်ပြီး ဆက်မဆောက်တော့ဘူး။ တခြားမှာရှာတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ ကမ္ဘာ့အကြီးစားရေကာတာကြီးတွေရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ရေကာတာပေါင်း ၂၅၈၀၀ ရှိတယ်။ ယန်စီမြစ်ရဲ့ မြစ်ကြောင်းတစ်လျောက်နဲ့မြစ်လက်တက်တွေထဲမှာ ရေကာတာပေါင်း ၁၀၀ ကျော် တည်ဆောက်လျက်ရှိပြီး ဆောက်လုပ်နေဆဲလည်း ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် မဲခေါင်မြစ်အပေါ်ဘက်နားမှာ ရေကာ ၄၃ ခု ဆောက်ဖို့ စီမံချက်ချထားပြီးဖြစ်တယ်။
တရုတ်ပြည်အတွက်တော့ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းက မဖြစ်မနေလုပ် ရမဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့အတွက် အဲဒါက ထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်။ ရေအားလျှပ်စစ်ကို နှစ်ဆတိုးပြီး ထုတ်လုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်မဲ့ ပေါ်လစီကို ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာလာပြီး အကောင်အထည် ဖော်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ မြစ်ကြီးတွေ ကောလာတဲ့အတွက် လယ်သမားတွေလည်း ဒုက္ခရောက်တယ်။ ငါးတွေသေတယ်။ မြစ်ရေခန်းခြောက်ပြီး မြေတွေလည်း ပက်ကြားအက် ကုန်တယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်မှုက အနာဂတ်ရေရှိရေးအတွက် အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရေခဲမြစ်တွေမှာလည်း မြစ်တွေ အများကြီး ပျောက်ကုန်တယ်။ ရေတွေမရှိတော့ဘူး ရေခဲတွေ မရှိတော့ဘူး။ ဟိမ၀န္တာတောင်မှာလည်း ရေခဲတွေ လျော့လာပြီး ရေခဲတွေအရည်ပျော်လို့ ရေကန်သစ်ကြီးတွေ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီရေကန် သစ်ကြီးကရေတွေ အောက်ကိုစီးကျတဲ့အခါ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ တစ်ညတည်း ရေအမြင့် ၂၄ ပေအထိ မြင့်တက်လာပြီး ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၂ လလုံးမိုးရေချိန် ကောင်းကောင်းမရရှိတဲ့ မင်းဘူး၊ မန္တလေး၊ ရမည်းသင်း မြို့တွေရဲ့ စိုက်ရေးပျိုးရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ရေတွေကို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆောက်လို့ ရေတွေကို သိုလှောင်မယ်။ မိုးကလည်း သူတို့ခန့်မှန်ထားသလို မိုးကလည်း ရရှိမှုနည်းမယ်ဆိုရင်၊ ရှိသမျှရေတွေကို ထိပ်ကသိုလှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အောက်ကမြစ်ကြောတစ်လျှောက်မှာ ရေတွေခန်းခြောက်သွားမယ်။ ဒါတွေကို စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဧရာဝတီဟာ သူဟာနဲ့သူ မြစ်ကြောတစ်လျှောက် လိုတဲ့နေရာတွေကို ရေပေးဝေပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင် သွားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိဖို့လိုတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ အနီးနား တစ်ဝိုက်လောက်သာ Environmental Assement လုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပြုလုပ်တာဟာ ဘယ်လို နည်းနဲ့မှ Scientific Conclusion ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ အောက်ကြော တစ်လျှောက်အထိ လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငလျှင်အလှုပ်ဆုံး ဒေသက မြစ်ဆုံဒေသပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဒေသမျိုးမှာ ဆောက်ခြင်းက အန္တရာယ် အလွန်ကြီးပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/25/2011 1 အကြံပြုခြင်း
by May Thingyan Hein on Saturday, September 24, 2011 at 12:22pm
စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ရန်ကုန်မြို့
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းဆောက်လုပ်တဲ့ နေရာကို တရုတ်ကုမ္ပဏီကနေ တရုတ်အလုပ်သမား အမျိုးသား ၅ သောင်းကို ခေါ်သွင်းလာမယ်လို့ ကြားတော့ ကျမ တော်တော်လေး သွေးပျက်သွားမိတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့၊တော်ဝင်နှင်းဆီမှာ မြန်မာငှက်နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအသင်းက ဦးစီးပြီး ရန်ကုန်က ပညရှင်အသီးသီးကို ဖိတ်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျမ တက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီက ပြန်တော့ကျမတကိုယ်လုံး ညှိုးခြုံးပြီး တွေးစရာတွေ ပါလာခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ကျမရဲ့ခြောက်အိပ်မက်က စတော့တာပါပဲ။
လှည်းတန်းဈေးကလည်း တရုတ်ဈေးဖြစ်နေတယ်၊ မြင်မြင်သမျှ လူတွေကတော့ မျက်လုံးမှေးမှေး၊ အသားနီစပ်စပ်နဲ့ ချွေးတွေ စီးကျနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ကျမ လက်ထဲက ကိုင်နေတဲ့စာအုပ်တောင်မှ တရုတ်စာလုံးတွေနဲ့ စာအုပ်ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီ စစ်တပ်က ကချင်ပြည်နယ်ကိုတင် မက နေပြည်တော်ထိ တက်ပြီး သိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေကော ရောက်မလာနိုင်ဘူးလား။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် ကျမတို့ မြန်မာပြည် ပျောက်သွားနိုင်တာကတော့ ကျမ အတွေးထဲမှာ သေချာ သလောက် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဆောင်းတွင်းမဟုတ်ပဲ ခြောက်အိပ်မက် မက်နေတဲ့ ကျမလို မြန်မာပြည်သူတွေ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။
မြစ်ဆုံ ညီလာခံ မှ Eleven Media Group ၏ Chairman & CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်
4th Annual Myanmar Film Festival of Los Angeles at Downtown Independent Theater
Based onaKaren girl who flees from the fighting in Burma.
Highlight on the reality of Karen life and the lives of Burmese in general.
Writer: Brain O’Malley based onashort story by Gary Moore
လူငယ်များရဲ့ ဧရာဝတီ ( ဆောင်းဦးလှိုင်၊ အနဂ္ဂနဲ့ ရသ...
မြစ်ဆုံလာခံမှဦးဝင်းမျိုးသူ (မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ ...
မြစ်ဆုံ ညီလာခံ မှဒေါက်တာထွန်းလွင် (ထွန်းလွင်ဖေါင်ေ...
မြစ်ဆုံ ညီလာခံ မှ Eleven Media Group ၏ Chairman & ...